तस्बीरमा हेर्नुहोस भैरहवामा एमालेको जनसागर, एमाले नेताहरूको गर्जन, पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन दिन्नौं | News Dabali
तस्बीरमा हेर्नुहोस भैरहवामा एमालेको जनसागर, एमाले नेताहरूको गर्जन, पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन दिन्नौं
March 12, 2017 | 9:42 pm
भैरहवा । नेकपा एमाले देश बचाउन र देश बनाउन दृढ संकल्पित भएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बताएका छन् ।
मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई आइतबार भैरहवामा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमालेले देश विगार्ने गरी गरिने संविधान संशोधन स्वीकार नगर्ने बताए ।
‘बुहारी र ज्वाई भित्राएर स्वाभीमानी नेपालीहरूलाई अपमान गर्न खोज्ने मधेसीदल नेपालीका प्रतिनिधी हुनै सक्दैनन’, उनले भने, ‘संविधान बनाउने बेला सदनभित्र र बाहिर गरेर खुरुखुरु भत्ता बुझ्ने, समितिको सभापति बनेर सुविधा लिने नकचरोको पनि हद हुन्छ ।’
नेकपा एमालेका नेताहरूले संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक नेपाललाई कमजोर पार्ने योजनाको पहिलो खुड्किलो भन्दै त्यसलाई पारित गर्न नदिने बताएका छन् ।
पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन भएको रुपन्देहीको भैरहवामा पुगेर एमाले नेताहरूले संशोधन पारित गर्न नदिने बताएका हुन् ।
मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत आइतवार भैरहवामा हजारौंको उपस्थिति रहेको सभालाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको भावनाविपरीत सरकारले ल्याएको संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने बताएका हुन् । उनले वर्तमान सरकार विदेशी प्रभु रिझाउन व्यस्त रहेको समेत आरोप लगाए ।
‘वर्तमान सरकारलाई देशका जनतासँग कुनै मतलब छैन, ऊ त अन्तैका प्रभु रिझाउन व्यस्त छ । देशभक्त र विकासप्रेमी सरकार हटाएर बनेको यो सरकारले मुलुकका लागि कुनै काम गरेको छैन,’ उनले भने ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपाल पसेर नेपालीहरूमाथि गोली हान्दा सरकार चुइँक्क नबोलेको र थर्कमान बनेको ओलीले आरोप लगाए । ‘काम गर्ने हिम्मत छैन भने सरकारमा किन बस्ने ? यो देशलाई नोक्सान गर्न जडान गरिएको सरकारले देशको हित गर्न सक्दैन । जनताको यो उपस्थितिले देखाउँछ, सरकार हामी चलाउँछौं,’ ओलीले भने ।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार नेपाल र नेपालीको नभएको आरोप लगाए । ‘विधिवत् रूपमा त संसदबाट बनाए जस्तो देखिन्छ । तर चारतिर फर्केकाहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर टाउको जुधाएर मित लगाउने काम अर्कैले गरिदिएको छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनविरुद्ध पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले गरेको आन्दोलनको प्रशंसा गरे । ‘सरकारले अनावश्यक रूपमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो । त्यसले सबभन्दा पहिला पाँच नम्बर प्रदेशलाई टोक्न खोज्यो, त्यसपछि बाँकीलाई पनि यसरी नै टोक्ने योजना छ,’ ओलीले भने, ‘पाँच नम्बरका जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । मधेसी मोर्चाका नाममा दुईचारजना सडकमा उफ्रिए र ट्याउँट्याँउ गरे भने सरकारले देख्न तर तपाईंहरूको हजारौं, लाखौंको जुलुस देख्दैन ।’
सरकार नेपालीको कुरा सुन्दैन
ओलीले संविधान संशोधन विधेयक देशहितका विरुद्धमा रहेको पटक–पटक दोहो–याए । ‘सर्वोच्च अदालतले पनि संशोधन असंवैधानिक छ भनेको छ । तर यो सरकार नेपाली र नेपालीका कुरा सुन्दैन, अरूकै कुरा सुन्छ,’ ओलीले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, एमालेले यो प्रस्ताव कुनै हालतमा पारित हुन दिँदैन किनभने यो नेपाललाई कमजोर पार्ने योजनाको पहिलो खुड्किलो हो ।’
अध्यक्ष ओलीले रानीको जन्मदिनमा केटाकेटी जम्मा पारेर चकलेट बाँडेजस्तो नागरिकता बाँड्न नसकिने बताए । ‘सीमामा अरू देशका मानिस जम्मा गरेर नागरिकता बाँड्न सकिन्न,’ उनले भने ।’ उनले संविधान विभेद नरहेको बरू आरक्षण रहेको बताए ।
‘एमाले बोकेका नीतिहरू मधेसका जनताले थाहा पाए भने आफ्नो शटर बन्द हुन्छन् भनेर मोर्चाका नेताहरू छट्पटिएका छन्,’ ओलीले भने ।
नयाँ शक्ति: भ्रष्ट बुद्धिजीवीहरूको संस्था
अध्यक्ष ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिलाई भ्रष्ट बुद्धिजीवीहरूको संस्थाको संज्ञा दिए । ‘मोर्चाका नेताहरू एमालेलाई तराई पस्न नदिने भन्छन्, नयाँ शक्ति नामक भ्रष्ट बुद्धिजीवीहरूको संस्थाले पनि एमालेमुक्त नेपाल भनेर ट्वीट गरेछ । कसको दाना खाएर उनीहरू यस्तो गर्दैछन् ? एमाले देशव्यापी छ, नेपालीव्यापी छ । हामीलाई कुनै ठाउँमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकलाई विभाजनतर्फ लैजान खोजेपनि त्यो कुनै हातमा पूरा नहुने बताए । ‘अहिले संविधान असफल पार्न खोजिएको छ । समयमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने योजना छ,’ गौतमले भने, ‘ठीकै छ, त्यो सफल पनि होला । तर यो देश असफल हुन सक्दैन, हुन दिइँदैन । संविधानको इतिहास साढे छ दशकको छ तर यो देशको इतिहास चार हजार वर्षको छ ।’